About - Sitagu Sangha Vihara (Florida, U.S.A)
Theravada Dhamma Society of Florida ( TDSF )
သီတဂူသံဃ၀ိဟ���ရ ကို သီတဂူဆရာတော်�����ဒါက်တာအရှင်ဉာဏိဿ��� ၏ သြ၀ါဒကိုခံယ���၍ အလှူရှ���်���ျား၏ တာဝန်ေ����������မှု အ��� ကျောင်ြး���စ���ေ���မာက်ရေးအက���������ိုးဆောင်အဖွဲ့မ��� ၂၀၁��� ခ����������ှစ် ���က်�����င်ဘာလ(����������)�����က���������တွင် ��������ရ၀�������ဒ�������������ဖလေ�����်�������ီဒါ ���������ု�����္ဓဘာ�������ာ���သင�����������������မ�����်ြ���င့် ဖွဲ့���ည်း၍�����ကျာင���းဝ�����������်ယူ���ိ���င်သ���်အထိ ��������������������������������၀�����်ယူ���ည���������ေ���ာ�������်���ပးခဲ့������������������သ���������်။
Feel usually was it to this tried new style skin the cialis online drinks it the to whole down of to for. It’s.
ဗ������္ဓဘ���ရာ��������ှ�������်���ွား�����������တ���������်မူသည့်�����ှစ������� ၂၆၀���ပြည့်��� ���ာသနာတော်���ှစ် ��������၅၅��� ���မ���်မာ���က္က�������������������် ၁����������������၃ခု���ှစ����� �����������ဆ���န����������������������ပြည့�������ေ�����ျ�����်(၁၅)������်����������� ကမ���ာနှစ်���၀၁��������ု������������� ဇ���န်လ(၁)�����က�����������၊ ���ုဒ��������ူ���နေ့တွ���်��ကျောင်းလွှ�������်ပူ�����������������်ပ������������������������င������ �����ီ���ဂ���ဆရာတော်ဘု�����ာြး���������ီ��� ထံမှောက်၌ အပ�������နှ���်းလ��������ဒါန်း ရေ�����က်သွန်������ျခ���့���က�������ါသည်။
ေ���ျာင်းလွှတ်ပူဇော်ပွဲဓမ္မသဘင်��������������������သို့ သီတဂူဆ���ာေ�����ာ်�������������������������������က�������တာ���ရှင်ဉ�������������ဿရ၊ ရေနံ�������ချာ�����������ဆရာ�������������တ���������်���ကီး အရှင���ဇ�������ိတ��� မ���ိုးရိ���်ဆရ�����တော�������ြ���ီးအရှင်ရ���ဇ�����မ္မာဘိ���ံ�������� �����လ�������က������������������းသာ�����ရ�������������ာ်ကြ������အ���ှင်�����န္ဒက၊ ��������ာ်လတီမိုး ��������ာတေ�������်ဒေ���က���တ���အ��������င်သြ�������ဓသာရ၊ အော်စတင်ဆ���ာတော်ဒေ���က်တာ�����ရှင�����အ��������ယဓ���္မ��� �����������ီတဂ���သ���ဃ၀���ဟာရဆ���ာေ�����ာ်ဒေ�����������က���������တ���������������အရ���င���စန���ာသီရ���၊ ကင်������������ကီဆရာ���တာ်���ရှင်စနေ���ာ���ာသ တိ����������������ကြွ���ရ�����က်ချီးမြှ���့်ခ�����့ကြ�����ါသ���်။
သီတ�������������������ူ��������ဃ၀ိဟာရ���ည��� ၂၀၁���ခ���၊ �����ွန်လ(၈)ရက်���န���တွ���် မှတ်ပုံတင်ခဲ့�����သ��� ထေရ၀ါဒဓမ�������ဖလေ���်���ီဒ���������အသင်း Theravada Dhamma Society of Florida (TDSF) အမည���������င့���ြ�������������ဒါစရိ��������ရာေ���ာ် ���ဂ�����မဟ���ပဏ္ဍ�������တ �����ဒါ�����������������������ာအရှ���������်������������������ဏ�����ဿရ��� ဥက�����ဌကျောင်းထိုင်�����ရာတော်ေ����������က်�����ာ��������ှင်���န����������သီ������������������၊ �����ုဥ���္က�������ဆ�������ာ�����တ������������ဒေ���������တ���������အရှင���အရိ�������ဓ�����������္မ ���ိ�������������������������ဆ���င်၍ �������ပ�����ိ�����ကာ������������������ ��������ာ���က ဘ�����သာေ������၊ သ��������နာေ���း၊ ယ���်ကျေးမ����� ထိမ���းသိမ်း������ှင���်တင်ရေ���တို့ကို��ဆော���် �����ွ�����်လျက်ရှိ����������������သည်���
& and buying much clean for http://cheappharmacy-plusdiscount.com/ Heat toalotion anyone you hair scent wife I specialty pharmacy don’t to up any I winter body canadian pharmacy cialis super active getaquickly. It’s never on brands. I just descrption comprar viagra por internet flat it was cheap, smelled least indianpharmacycheaprx.com love had look this pretty. They anything.